Ngaphandle kokujwayelekile: "Angiyithandi iLinux, ngibuyela kuWindows" | Kusuka kuLinux
Ngaphandle kokujwayelekile: "Angiyithandi iLinux, ngibuyela kuWindows"
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Okunye, Kunconyiwe
Singabantu abaningi abasebenzisa namuhla I-GNU / Linux, kepha esikhashaneni esedlule bekuhluke kakhulu. Sisebenzise Windows, nalolu shintsho (ngenhlanhla noma ngamashwa) we Windows a Linux Bekugculisile futhi kumnandi kithina; kungasho ukuthi indlela yethu yokucabanga nokusebenza ne-PC isishintshile. Kodwa-ke, bekubanzima nakithi, ikakhulukazi ngoba bekumele sibe namandla amakhulu okugwinya "ukuziqhenya kwethu"? futhi kalula; yemukela ukuthi besingabasha ngokuphelele kulolu hlelo olusha.
Kepha akubona bonke abasebenzisi abafuduka besuka kwiWindows baya kuLinux abazizwa kahle, akubona bonke abantu abanamandla noma isifiso sokufunda okuthile okusha. Ngibazile abanye ukuthi lapho ufaka i-Linux kusobala ukuthi yehluke kakhulu kwiWindows (futhi ayiqondile neze). Uma sengeza kulokhu ukuthi isipiliyoni sabo sokuqala asijabulisi neze (mhlawumbe kungenxa yezinkinga zomshayeli noma okuthile okufana nalokho) ngoba kusobala ukuthi kuzokwenzeka njengoba sekwenzekile kubasebenzisi abaningi ... Baningi abasebenzisi ababonayo nabasebenza ku-Linux okokuqala anginaso isipiliyoni esihle kakhulu, noma kunalokho; isipiliyoni sakhe asihlangabezani nalokho okulindelwe okuhle futhi okumangalisayo okwenziwe; okulindelwe yithi uqobo (abasebenzisi abangasekho abasha ku-Linux) esibenzele kona.
Futhi yilapho konke kuqala khona ...
Isisho esilula njengokuthi “I-linux ayiphelele njengoba bangitshele"Noma into elula kakhulu efana"Ngikhetha amawindi”Iyakwazi ukwethula uchungechunge lwezikhala ezinhle, akucabangeki ukuthi lolu hlobo lwesihloko lungathandwa kangakanani (yize igama elifanele ligcwele).
Cishe kuwo wonke lawa macala alandelwa okuthunyelwe kokuqala komsebenzisi lapho ememezela khona ngesizathu se-X noma se-Y ukuthi iLinux ayilihle kangako nokuthi ubuyela ku-Windows; kulandelwe yilaba basebenzisi abaningi beLinux "baphoqa" ukuthi yebo, babuyele kulesistimu yokusebenza ephansi, njalonjalo. Size sifike lapho siqala khona ukuthumela izinto ezifana nokuthi “Ngaphambi kokuthi uthi okuthile kubi, kufanele uqale wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani"Noma"I-linux iphelele, nguwe ongazi ukuthi uyisebenzisa kanjani"njll. njll.
Ake sibone, kuyiqiniso ukuthi ngokombono wami, cishe kuzo zonke izici i-GNU / Linux ingcono kakhulu kuneWindows noma iMac, futhi kuyiqiniso impela ukuthi abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe "baya ngakwethu" bese beqala sebenzisa i-distro ye-GNU / Linux, ngakho umbuzo wami ……Kungani ukhwela kumsebenzisi ngeqiniso elilula njengaleli engikhuluma ngalo?
"Ukuhlasela" noma ukugxeka ngendlela yokuthi umsebenzisi ozame i-Linux distro kuphela wangayithanda (nganoma yiziphi izizathu) ayilungile, noma ngabe silungile noma cha, noma ngabe umsebenzisi ukwazi ukusebenzisa / ukusebenza kahle kwiLinux, akusona isizathu sokukugxeka ngaleyo ndlela. Esikhundleni sokwenza lokhu kufanele sikhathazeke ngokuzama ukumsiza.
Engifuna ukukuqonda ngalokhu okuthunyelwe ukuthi yebo, iningi lethu kwakungabasebenzisi beWindows ngasikhathi esithile; Futhi njengoba nathi ngokwethu sazi ukushiyeka kwale OS, kungenxa yalesi sizathu ukuthi kufanele sisize abasebenzisi abanolwazi / ulwazi oluncane kunathi. Uma sisebenzisa i-Linux distro, kuhle, kuhle, kufanele sikhuthaze ukusetshenziswa kweFree Software ngakho-ke kufanele sikhuthaze ushintsho olusuka kwiWindows luye kwiLinux, kepha lokhu akusho ukuthi "ukuhlukanisa" noma "ukudala umgoqo" phakathi kolwazi lwethu ingxenye noma enye. yomphakathi, ngokuthile okunjenge-banal njenge-HN kungaba phambi kwekhompyutha ye-Linux (HN = Nalgas Hours).
Kokubili ukunyakaza koMthombo Ovulekile kanye nokunyakaza kweFree Software kusekelwe enkululekweni yomsebenzisi nangenxa yomsebenzisi, kepha… kunenkululeko ebaluleke kakhulu okumele ibe ngaphambi kwalokhu: “Inkululeko umsebenzisi okufanele akhethe ukuthi iyiphi uhlelo olusebenzisayo azolusebenzisa".
Ngeke ngiyifihle inqubo yami; Ngingumlandeli we-100% we-GNU / Linux futhi ngihlala ngincoma futhi ngiphakamisa ukusetshenziswa kwayo, futhi ngiyayizonda iMicrosoft nakho konke ekumelelayo. Kepha umsebenzisi kufanele akhululeke ukukhetha ukusebenzisa iWindows noma iLinux, lokhu okwami; inkululeko ebaluleke kakhulu.
Iphuzu nomqondo ojwayelekile ... ukuthi asigxeki, kunalokho siyafundisa, sikhombisa labo basebenzisi abangagculisekile ukuthi bebengakwenzi ngendlela engcono kakhulu, ukuthi akusikho ukuthi iLibreOffice ayihambisani ne-MS-Office, kodwa impela ... njll njll 😀
Lokhu kube yikho konke 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ngaphandle kokujwayelekile: "Angiyithandi iLinux, ngibuyela kuWindows"
Kungikhumbuza ukuthi iLinux iyasetshenziswa noma cha njengoba wazi, kepha wonke lawa ma-windoleros asebenzisa impikiswano elandelayo, "ngoba ngishilo kanjalo", abanikezi idatha ethembekile ngayo. Futhi-ke siyabathumela ukuba babambe noma okufana nakho.
Ngilalele ubone le ndatshana engikutshela yona. Kunendatshana kubhulogi yeBlogspot ebizwa nge-Loveless (noma enye into efana naleyo, sarasita igama huh ??) elisho into efana nokuthi "kungani ngingasebenzisi i-Linux" noma "kungani ngithumela isichitho ku-Linux". Uzobona engikutshela khona, ukuphikisana okungu-0
Yebo, ngiyakhumbula (futhi ngiyaxolisa ngamafomu) aphakathi nendawo futhi entula i-cerebral cortex ... waze wangithathela wona ezihlokweni eziningana, igama lokugcina i-ggrrrr ....
Kokunye, ungalwi ... kulula, bathi iWindows7 ingumbungazi, ukuthi akukho okuhle ngokwengeziwe, ubakhombise iCompiz futhi ubakhombise okuphambene, bakutshele ukuthi uhlelo ludla okuningi ne-htop, ubakhombisa okuphambene ... akukho okulula 😀
iso ngeso, izinyo ngezinyo
Amagama ahlakaniphile kaRyuzaki
Ngikholwa ukuthi ukuphendula ukungahloniphi ngokungahloniphi okuningi kuphendula ukungabi bikho kwemfundo.NginguSolwazi e-UNAM, ngithanda isoftware yamahhala futhi ngabelana ngezinhlelo zokuklama, izingqungquthela namavidiyo wesiko lamahhala nabafundi bami. I-Linux kufanele isatshalaliswe ngendlela eqaphelayo nephikisanayo.
Abantu abalokhu bethuka iWindoleros bakhombisa ukungabi nabuntu nenhlonipho encane abanayo ngomphakathi we-GNU / Linux. Ukusabalalisa kweLinux kwenziwa ngezingqungquthela, izifundo, izincomo. Ilungelo lokuhlonipha abanye ukuthula (Juarez).
I-athikili enhle kakhulu, manje kahle, ngingomunye walabo abafuna ukuya ezweni le-linux (i-LMDB ngqo) inkinga yami isekungahambisani njengoba usho….
Njengoba usuvele uchwepheshe ku-linux kanye / noma ujwayele, ngabe uyalusingatha lolu daba?
Yikuphi ukungahambisani esikhuluma ngakho? Ngazise
I-distro engicabanga ukuthi ibamba i-hardware okokuqala iMageia, ukuthi njengoba ngingazami i-LMDE angikwazi ukukutshela noma yini
Lapha izinga ube nokuhlangenwe nakho okubi ngakho, ekutshela ukuthi akaphakamisi lutho nakancane kwikhompyutha yakhe i-HAHAHA
+1, usho ukuthini ukungahambelani? ukubona ukuthi singakusiza yini 🙂
Imvamisa ngisebenzisa i-LMDE futhi anginankinga, okuwukuphela kwento i-cam e-Skype ebheka emuva (ngiyibhekise phansi i-XD) nokuthi ngeGnome3 umsindo awuhambisani nami, kepha lokho sekuvele kuyinto yeGnome ...
Mhlawumbe lokhu kuzokusiza ngenkinga ye-webcam ku-skype http://fugatoxica.blogspot.com/2010/11/skype-para-linux-imagen-de-la-webcam-al.html
Izikhathi eziningi sithi iLinux ayisihle kangako, ayinazo izinhlelo engizisebenzisayo, iLinux kunzima ukuyisebenzisa futhi ukubandlulula kudlula isifiso nokuzimisela kokufunda okuthile okusha. Ezinyangeni ezi-5 ezedlule ngiyekile ukusebenzisa iWindows ngemuva kweminyaka engu-14 yokuba uhlelo engiluthandayo, ngathola isibindi ngakufaka kuma-pc asendlini yami, manje umshana wami oneminyaka engu-7 ubudala ujatshuliswa yi-fedora, ubaba wami nomama bayangithanda linux mint futhi ngijabule nge-sabayon. Ngokuqondene nezinkinga, zikhona futhi zizoba khona kodwa kuhlala kukhona umuntu ozimisele ukukusiza, njengoba kukhona nabazidlayo abazokutshela: buyela kuWindows lapho konke kulungiswa ngokuchofoza okumbalwa. Ngokwami, i-linux iyangijabulisa noma ngabe inamaphutha, ngeke ingenze ngiyeke ukuyeka ukuyisebenzisa. Sanibonani nonke
Kulungile kuwe, ubaba njengamanje usebenzisa Ubuntu Lucid, ugxeka i-Unity neGnome3 kanye nami nakho konke hahahaha.
Ubuntu uzama ukusungula, amaphilisi, ama-iPhones, ama-ipads asetshenziswa kakhulu futhi izama ukuzivumelanisa nemakethe yamanje abaningi abayithandi le nto, ngokwami ​​angisebenzisanga Ubuntu noma iGnome 3 ngenxa yokungahambisani kwe-Ati futhi angiyenzi Ngithanda umqondo wokuzula phakathi kwamawindi ukuthola okuthile, kepha ngizozama futhi emuva kwesikhathi.
UDavid Myths kusho
ISabayon Linux ikwenzela kahle? Ngoba ngiyayithanda kepha iqina ngokuphelele njalo kabili ngamathathu: - /
Phendula uDavid Mitos
Okwenzekayo ukuthi ngisebenzisa amawindi kuphela ukudlala imidlalo, kepha manje ngifuna ukufunda ukwenza i-WEB ne-DB, nginezinsizakusebenza ezinqunyelwe futhi kufanele ngikwenze ngedwa (i-inthanethi emsulwa).
Sengizamile i-FEDORA ne-UBUNTU, okokuqala ngukuthi ngilingana kakhulu kepha khona lapha bangitshele nge-LMDB ukuthi kuhle impela.
Ungafaka futhi i-SublimeText 2, Aptana, Netbeans… .. ziningi ezinhle kakhulu.
Uma une-inthanethi unazo zonke izindlela 🙂
Ngiyakhumbula ukuthi ngenkathi ngiqala ukufaka i-GNU / linux distro eyayiyi-ubuntu 10.4 udadewethu wacishe wangishaya hahaha ukumangala okukhulu akuthola lapho ebona ukuthi into yokuqala ayiqalile kwakungewona amawindi, futhi kusukela ngalowo mzuzu ukwenqabile ukusebenzisa I-GNU / linux noma yini engaveli kwi-microsoft, kunalokho, mfowethu, oneminyaka engu-8 kuphela, wafunda nokusingatha izinto ezinjengokufaka amakhosombe ne-terminal, ukufaka, ukukhipha isoftware kwenziwa lula, futhi uyenqaba ukusebenzisa noma yini engeyona i-linuxmint yakho ne-xfce noma i-gnu / linux distro.
Ngicabanga ukuthi uma sikhuluma ngokubuka okusebenzayo, abantu bazoqhubeka nokusebenzisa okubafanele kakhulu, abajwayele noma abanethezekile, futhi kuyadabukisa ukuthi abantu abaningi bazikhawulela kulokhu kuphela futhi abanandaba namanye amanani afana nalawo akhuthazwa nge-software yamahhala.
Abesifazane ngabesifazane, noma yini efanayo, isimilo esibi (ikakhulukazi ama-blondes) hahahaha
Yimibono yami, noma Isibindi, ngaphandle kokuba ngamehlo, ingabe yinto e-misogenic?
Machista, ngingakuqinisekisa ukuthi nakancane, kuyangikhathaza kakhulu ukuthi abantu bayabandlululwa ngokuba yindoda noma owesifazane.
I-Misogenous ayiveli esichazamazwini se-RAE, uma uqonde ukuthi ukungazethembi abesifazane akunjalo neze.
Ngiyethemba ukuthi awuyithathi ngendlela engafanele (kepha njengesiphakamiso sokucabanga ngombono wakho womhlaba), kepha ukuphawula kwakho kukhombisa ukungazethembi, imibono futhi, ngezinga elikhulu, isimo sokuzethemba.
Nginomuzwa wokuthi ulangazelela ukuba ngumuntu obucayi futhi ufuna ukumelana nezindlela zomphakathi kanye nokuvumelana (engicabanga ukuthi kuyinto ebaluleke kakhulu), kepha ngasikhathi sinye, futhi ngendlela ephikisanayo, uzala imicabango eqinile nengenabulungisa ethi zigcina zikwenza, ngokudidayo, into yalokho ofuna ukukulahla.
Angikuthathi ngendlela engafanele, uma ngingawagcini amazwana lapha kungenxa yokuthi sihlala sijabule njalo.
Akulutho olumelene nama-blondes, yikho nje ukuthi angiwathandi ngoba ngikuzwile lokho kuphawula ngineminyaka engu-5 futhi njengengane uyakugwinya konke
Ngaphezu kwalokho, abantu ababili abahle kakhulu engibaziyo bangama-blondes.
Ngiyazi ukuthi lowo mlingiswa uyisilima kodwa lokho, njengengane sakugwinya konke.
PS: Sizowathumela ku-KZKG ^ Gaara? HAHA
Bengingakwazanga ukudlula lapha futhi angizibonanga neze izimpendulo zakho. Into enhle awuzange uyithathe ngendlela engafanele. Futhi-ke ukusho nje ukuthi akekho umuntu okhululekile ebandlululweni nasezinkolelweni ezigxilisiwe kithi kusukela ebuntwaneni, kepha uma umuntu ebona futhi kufanelekile ukuyeka ukuzikhiqiza, kungakuhle.
PS Futhi kuma-vibes amahle: lokho wena noKZKG enikusebenzisayo ukugwinya kungokwabo, futhi bayahlonishwa, haha.
Angizange ngiyiqonde leyo nto yokugcina hahaha
Kungani ngizokuthatha ngendlela okungesiyo? Lapha thina bafundi siyazana futhi asibi kubi nhlobo
Vele, abantu abadala kufanele basondezwe ukuze babone amagama kahle
Ngemuva kweminyaka engama-21, senginezintombi ezingaphezu kwezingu-4 futhi ezimbili zazo zingama-blondes, ngiyavuma ngesibindi i-XD
bafana ngisanda kufaka i-LMDE i-pc yakudala ukuze ngiyivivinye, kepha ngangesaba kakhulu, ngangino-ubuntu futhi ayinginikanga nkinga ...
512 kusuka ku-ran pentin 4 kuya ku-2 gb no-40 HD yi-optiplx 260
Zama i-LXDE, ngine-RAM efanayo futhi yilokhu engikusebenzisayo
EMageia, uma ingatholakali ku-LMDE
UGustavo Castro kusho
Anginakho okunye engingangeza kokuthunyelwe kwakho, kepha ngithanda ukusho okuthile okuhlale ... kungikhathaza? (noma ngicasukile, mhlawumbe), kepha muva nje bengikukhipha kakhulu ekhanda lami, futhi lokhu kungukuthi: Ngiyakuzonda lokho kumasayithi amaningi azibiza ngokuthi "amasayithi akhethekile we-GNU / Linux", kepha i-distro kuphela abakhuluma ngayo Ubuntu. Futhi, nginesiqiniseko esingu-99.99% sokuthi uma othile efunda lokhu, bazothi: "pfft! ozonda Ubuntu ngaphezulu », kepha cha, akunjalo. Ngingumsebenzisi we-Ubuntu, ngiyithanda kakhulu, kepha akusho ukuthi ukuphela kwe-distro engiyisebenzisayo, futhi kusobala ukuthi ayiyona engcono kakhulu ... okungenani hhayi eyami.
Kujwayelekile ukuthi ubheke ukuthi ungayenza kanjani i-KDE distro ethile, ikakhulukazi, futhi okuwukuphela kwe- «imiyalelo» yile: -Vula i-terminal bese uthayipha i-sudo apt-get ...
Kuyinto ecasulayo ngempela i-D;
Sanibonani, futhi uma ufunda okungenhla, ngiyabonga x)
Phendula uGustavo Castro
Uyemukelwa uGustavo Castro:
Uqinisile ngokwengxenye. Khumbula ukuthi i-GNU / Linux ayitholakali nje kuphela. Ukwazi nge-GNU / Linux ukuqonda izinto eziningi. Mhlawumbe mina, ongumsebenzisi we-Debian, ngizoshicilela izindatshana zami eziningi kuzinhlelo zokusebenza ze-.deb, kepha hhayi ngenxa yalesi sizathu omunye umsebenzisi kufanele azizwe ekhishwa inyumbazana, ngoba njengoba ngisebenzisa dpkg ngi, umsebenzisi we-Arch usebenzisa pacman -S noma eyodwa evela evulekileSUSE i-rpm -i futhi isicelo sihlala sifana ncamashi. Ku-Desdelinux ngokwesibonelo, lapho ngikhuluma ngohlelo lokusebenza, ngizama ukuthinta izinto ezijwayelekile, ezisiza wonke umuntu noma ngabe iyiphi i-distro.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, ngithatha leli thuba futhi ngiyakutshela: Siyakwamukela kusayithi lethu 😀
Iqiniso ukuthi lapho umuntu enesiza sakhe noma ibhulogi yakhe, kusobala ukuthi bafuna ukuzenza aziwe ... ukuheha abasebenzisi, futhi indlela elula yokufeza lokhu ukukhuluma nge-Ubuntu, ngani? Ngoba yi-distro ukuthi ama-heater amaningi Lowo onabalandeli abaningi, ngakho-ke uzobe wenza okuthunyelwe kwabasebenzisi abazoza bazogxeka, kanye nabasebenzisi abazokubonga ngokuthunyelwe.
Le yindlela elula ... kepha akusho ukuthi ilungile kakhulu.
Naba ozakwethu ababili kanye nabafundi bethu abahlala besitshela ukuthi kusayithi, sibeka TOO MUCH Ubuntu izindatshana, thembeka ... uyabona Ubuntu-mania lapha? … noma kunjalo…
Sizama ukujabulisa wonke umuntu, i-Arch, i-LMDE, abasebenzisi be-Debian, futhi yebo ... Ubuntu futhi, ngoba iyi-distro njenganoma iyiphi enye.
Ngiyabingelela futhi empeleni, ngiyabonga ngokuphawula kwakho 😉
UGustavo Castro, ngicabanga okufanayo, i-distro ngayinye (kuya ngomphathi wephakeji) inomyalo wayo wokufaka isoftware, kepha kunendlela bonke abelana ngayo ...
Yebo, bengingabhekiseli ezinhlotsheni zemenenja yephakeji ezikhona, kepha iqiniso lokuthi kumasayithi amaningi "akhethekile", bakhuluma nge-Ubuntu kuphela.
Ngivumelana nawe. Isibonelo, ngithanda ukuzama izinto ezihlukile. Ngibe noMandriva isikhathi esingangenyanga noma ngaphezulu futhi ngiyithande kakhulu. Selokhu ngangena emhlabeni weTux, ngisebenzise ama-distros ahlukene. Kusuka ku-Ubuntu, i-PCLinuxOS, i-Fedora, i-openSUSE, i-Debian, kunjalo, iya ku-Arch, ngisho ne-FreeBSD. Kepha engikushoyo ngaleyo "ntandokazi" ye-Ubuntu ukuthi bavele bakhuthaze ukusetshenziswa kwaleyo distro. Vele angiphikisani nalokho, kepha ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ungakhethi uma uzama ukuba nesayithi mayelana ne-GNU / Linux kukonke, hhayi ukusatshalaliswa nje, noma ngabe kuyini.
Lapho ngishicilela izindatshana zami, ngizama ukungachemi ngangokunokwenzeka. Nasi isibonelo -> http://gusta-who.x10.mx/index.php/component/content/article/44-descargas/92-bleachbit-limpia-y-libera-espacio-de-tu-sistema
Ngendlela, bengingazi ngaleli sayithi, kepha selivele labekishelwa ibhukhimakhi
Kuyintokozo ukuba kumabhukhimakhi wakho 😀
Inkululeko ngaphezu kwakho konke, ngiyayithanda i-Apple, kepha ngiyabahlonipha bonke abasebenzisi, bengizolahlekelwa okuningi. 1 ukubingelela 😉
Ukuhlonipha, babize ngama-appletoses futhi yilokho kuphela.
Ngibabiza ngokuthi ama-macaque
I-athikili enhle kakhulu ngisebenzisa i-windown kuphela kwimidlalo, kukho konke okunye i-GNU / Linux futhi ngifunde okuningi kepha ngifunde okuningi futhi uma kuncoma ukusetshenziswa ne-distro engiyincomayo yi-Ubuntu, yize ngiyisebenzisa kubuntu.
Imvamisa abantu, ngezinga elikhulu noma elincane, bamelana nezinguquko, kuzinhlaka zabo zomqondo, kanye nakwizenzo zabo nemikhuba yabo. Ngokuya ngocwaningo oluthile lwengqondo, lokhu kungenxa yamaphethini wokuqonda kanye nokuthambekela kwamasiko ukugwema ukungqubuzana nosizi elikukhiqizayo kule nqubo. Lokhu kuze kudale ukwenqatshwa kanye nenzondo ngokuya ngokuhlukile. Kuphela lapho izifundo zithola izizathu ezanele nezindlela zokwamukela ushintsho, inqubo yokwephula umthetho yokwenza noma ukucabanga ngokuhlukile iyatholakala.
Kakhulu, yingakho abantu bemukela imithetho nemibandela ye "status quo" noma ngabe iphikisana nezintshisekelo nezidingo zabo. Lokhu kusivumela nokuthi siqonde ukuthi kungani abantu abaningi beqhubeka nokusebenzisa iWindows nokuthi kungani abanye babo begcina bengasafanele iLinux. Futhi kungenzeka into efanayo nabasebenzisi abagxeka kakhulu iziphakamiso ezintsha ezinjenge-Unity neGnome-shell; noma nalabo abangafaneleki ama-distros ngaphandle kwalawo abawasebenzisayo.
Ah kahle, ngicabanga ukuthi le ngxoxo yezengqondo ayisebenzi ecaleni lami, angesabi ukuzama okuthile okusha futhi / noma okunzima futhi inqobo nje uma izinguquko zingcono futhi ngokuthanda kwami ​​anginazinkinga, izidalwa eziphilayo zingashintsha noma ziphele. Ngenxa ye: "noma nalabo abangafaneleki ama-distros ngaphandle kwalawo abawasebenzisayo." Ngicabanga ukuthi ukhuluma nge-Ubuntu, angiyikhiphi inyumbazane, ngiyaphikisana nayo kuphela futhi ngiyayikhipha ngoba inezinto eziningi okufanele izenze zingafaneleki, abasebenzisi abaningi abathinta amaqanda nokukhangisa okuthi noma ungabubheki kukuyo yonke indawo, ukuthi ngaphandle kwegciwane, amaphutha , ubunye (izimbungulu namaphutha kuvamile kuzo zonke izinhlelo ezisebenzayo, ngakho-ke ingasaphathwa i-distros).
Kuyacasula ukubona ukuthi bathatha kanjani isikweletu abangenaso ngempela ngokombono wami (kulokhu ngiqonde bonke abakhona abathi Ubuntu "bungcono kakhulu"), lapho kuyi-distro ejwayelekile yokuthi ekusebenzeni nasekuzinzileni kungaphansi kwabanye hhayi "eyaziwa kahle" kangako noma esakazwa yonke indawo. Mhlawumbe kukhona ama-anti ubuntu idiots ngoba yebo noma ukuphikisa, kepha nginezizathu ezanele zokugxeka, kepha wonke umuntu osangene ngesihloko sakhe.
"Ingxoxo engokwengqondo" obhekise kuyo kumane nje kuwukuqondiswa okulula kokunye kokuhumusha okwenziwe ukuzama ukuqonda izehlakalo zokumelana nokushintsha futhi ngokuya ngemikhuba ekhona; futhi kwabonakala kufanelekile ukuyikhuluma ngenxa yendaba okukhulunywe ngayo esihlokweni se-KZKG ^.
Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uzibheka njengomuntu ozimisele ukushintsha futhi onekhono lokwenza kwenzeke lapho uthola izizathu ezanele zokwenza lokho. Kodwa-ke, ukuyithatha kalula kubeka engcupheni yokugxekwa: iresiphi, nokuvuleleka: iphethini yokuvumelana nezinkolelo ezifihliwe.
Lapho ngikhulume (njengesinye isibonelo) ukwenqatshwa abanye abasebenzisi abakushoyo ngama-distros ngaphandle kwaleyo abayisebenzisayo, ngazama ukuveza ukuthi ukumelana noshintsho kuvame ukufana nokwenqaba okwehlukile. Ngenxa yalokho, bengingabhekisi ku-Ubuntu (ukube bekunjalo, bengizokusho) kepha kuwo wonke ama-distros, okukubi kakhulu noma okuncane, abekade enqatshelwe ukungafaneleki kwabasebenzisi bamanye ama-distros.
Futhi iqiniso angikungabazi ukuthi unezizathu nezizathu (noma njengoba usho "izimpikiswano") zokungafaneleki nokuphikisana no-Ubuntu noma yini. Umbuzo uzoba ukuthi, ingabe lezi zizathu zanele ngokwanele?
Uma ubheka isigaba sesibili sempendulo eyedlule kahle, uzobona ukuthi ngithi "ngokombono wami" ergo bayizizathu ezizwakalayo, futhi yize abanye bengazinaki izizathu engizichazile ngenhla, futhi yize zisuselwa embonweni wami, akunjalo. ikhubaza ukuze kube nezizathu ezanele zabanye.
Vele, ukuba iphuzu lokubuka akubeki eceleni ukuthi kungenzeka kube nesizathu esanele nesinenhloso (futhi akukuqinisekisi lokho).
Endabeni yami. Isikhathi sokuqala ngisebenzisa i-linux Kubuntu. (5 noma 8 iminyaka edlule)
Kamuva, ngithole okuthunyelwe okuvela ku-Ubuntu.
Hawu ngimangele. Ukuphathwa, ukusetshenziswa, izinhlelo.
Ezinsukwini kamuva, umsebenzisi we-Linux we-100%.
Kuphela uma uphuthelwa ngalezo zinsuku lapho i-Antivirus yami isiphelelwe yisikhathi, ukubheka okhiye, Thola i-crack, keygen, serial nezinhlelo. Phula ukhukhunathi wakho amasonto.
Ku-linux, "Isibuyekezo esisha?" "Pacman -Syu"
HAHAHAHAHA yebo, impela ... "pacman -Syu -noconfirm" futhi voila, ngikhohlwa i-terminal HAHAHA.
Futhi uma ngikhuluma ngama-distros, ngesizathu esithile esingaziwa, ngivele ngacindezela iMandriva 2011 XD yami
Ngakho-ke, ngisebenzisa ngokunenzuzo iqiniso lokuthi kuzofanele ngiphinde ngifake i-distro, ngizophinde ngifake i-Chakra Ukusatshalaliswa okususelwa ku-Arch, uma ngabe ubungazi.
PS: Kuyanginyanyisa ukuthi ekuphawuleni kwami ​​ngithi ngisebenzisa iWindows Windows
Ungaguqula iWindows UserAgent futhi uyenze idlule njengeLinux, kuzoba yimfihlo yethu encane HAHAHAHA.
Yebo kepha kuhlose ukuba kude ne-Arch
Ngikhuluma ngeChakra ... Kufanele ngiqede ukwenza ilogo yeChakra futhi i- <° Linux ibone le distro, ifake izinto eziningi kakhulu ongazenza hahaha.
Bathandekayo nabathandekayo nonke:
Ngicabanga ukuthi akuwona wonke umuntu ongasebenzisa i-Linux, ngiqonde ukuthi, iWindows ingagxekwa ngezinto eziningi, kepha ilula, kulula ukuyisebenzisa kusuka ekuqaleni, ngaphandle kolwazi umuntu analo noma ukungabi nalo. Ngakolunye uhlangothi, isekela izinhlobo ezimbili zabasebenzisi, lowo ofuna okuthile okungaphezu kokuba nakho konke okuseduze nalowo ofuna konke kwenziwe, iLinux ayilusekeli lolu hlobo lomsebenzisi lwesibili, kunalokho, lolu hlobo lomsebenzisi alusekeli i-Linux ., kepha kuyilungelo lakhe, kungaba ngaphezulu. Kukhona nomsebenzisi ongenakho okunye angakwenza ngaphandle kokusebenzisa amawindows ngezizathu zokusekela, isibonelo uma enza umsebenzi we-3D.
Mayelana nokwesaba izinguquko ngenxa yezinqubo zokuqonda noma zamasiko ... ake sibone, kuliqiniso ukuthi ukugxeka okuthile kufanele uqale uzame, kepha uma sekwenziwe, futhi kucatshangelwa ukuthi ukunambitheka kuyinto eqondile, kunengqondo ukuthi imibono maqondana nalokhu ahlukile hhayi ngokunembile ngenxa yokwenqatshwa uqobo.
Ngokuqondene nami, ngisebenzisa i-LMDE, ngaqala ngonyaka owedlule ngeWindows ukuze ngingabi ikhompyutha engafundile, ngemuva kwezinyanga ezintathu ngakuhambisa phambili ukufaka Ubuntu 10.10 njenge-OS kuphela engangijabule ngayo kuze kuvele ubumbano, (ngazama, ngempela). Manje ngisebenzisa i-LMD futhi ngine-Mint 12 ku-virtualBox ukuhlola i-gnome 3 engangikholisi kakhulu. Sizobona.
Kwakungeyona inhloso yami ukubhala incwadi, yaphuma esandleni.
Ngicabanga ukuthi akuwona wonke umuntu ongasebenzisa i-Linux, ngiqonde ukuthi, iWindows ingagxekwa ngezinto eziningi, kepha ilula, kulula ukuyisebenzisa kusuka ekuqaleni, ngaphandle kolwazi umuntu analo noma ukungabi nalo. Ngakolunye uhlangothi, isekela izinhlobo ezimbili zabasebenzisi, lowo ofuna okuthile okungaphezu kokuba nakho konke okuseduze nalowo ofuna konke kwenziwe, iLinux ayilusekeli lolu hlobo lomsebenzisi lwesibili, kunalokho, lolu hlobo lomsebenzisi alusekeli i-Linux
Vele, ngoba uMageia ungomunye walabo abanikela konke okwenziwe
Iqiniso!!!! NgineMageia 3 njengohlelo oluphambili kuwo womabili amakhompyutha ami, emsebenzini ngoba angikwazi, (i-Navision ihlanganiswe ne-Office, grrr !!!), kepha nakwi-Windows uma ngikwazi ngisebenzisa yonke i-software yamahhala. Namuhla banginike ilaptop engifake kuyo iWindows 8 ngokwesicelo somsebenzisi, futhi banginika yona ngesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka esingakuvumeli ukuthi uqale uhlelo (yebo, iWindows 8 nayo inabo, futhi budedengu kakhulu). Ngimtshelile ukuthi ngizofaka iMageia 3 Linux, okulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi uma unezinkinga, ngazise ukuthi ngizokusiza. Sengikwenzile okunye ukufakwa okubili kwalolu hlobo futhi ngaphandle kwezinkinga, okunye ukungabaza kepha akukho okunye. Kulezi zinsuku i-Linux nesoftware yamahhala ingasetshenziswa yinoma ngubani, noma ngubani ongafuni ukuyibona iyazikhohlisa, ngaphandle uma besebenzisa isoftware ekhethekile ye-Windows….
Ngikunikeze impendulo yami kuwe Lesi sihloko 😀
HAHA ungakhathazeki, akuyona incwadi kepha okuthunyelwe okuthakazelisa 😀
Ubunye benzeka kimi ngendlela efanayo, ngazama ... kepha ngijabule kakhulu umsebenzisi we-KDE, ngisho neGnome3 + Shell angiyithandi.
Lutho, okuhle ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele sikhethe i-haha.
Sanibonani NIYAKWAMUKELA !!! esizeni 😀
Sawubona elav, sihalalisela ngale ndawo.
Ngisanda kufunda impendulo yakho futhi ngivumelana naye ezintweni eziningi, kodwa hhayi zonke. Ngicabanga ukuthi bekungalungile impela ukuthi ngisho izinto njengoba ngishilo, ngoba ngiqonde ukuthi iWindows ilula nokuthi iLinux ayiyona, futhi akulona iqiniso, iLinux ilula, kimi ilula kuneWindows, kepha hhayi kwasekuqaleni, kepha uma wazi ukuthi izinto ziya kuphi. Engikushoyo ukuthi isikhathi sami sokuzivumelanisa nesimo besiside kakhulu ku-OS eyodwa kunenye.
Bengingazi kahle ukuthi ngizokubeka kuphi lokhu okuthunyelwe, uma lapha noma ngezansi kwempendulo yakho. Uma lokho ukuhambisa.
Umuntu osebenzisa i-pc okokuqala kungakhathalekile ukuthi uhlelo olunjani lokusebenza uzozizwa elahlekile ngandlela thile, ukuthi amawindi alula kusukela ekuqaleni umbono wokubuka nokuzithoba ngokuphelele. Ngaphandle kwalokho, njengomzala wami oneminyaka engu-8 uzizwa elahlekile emawindini kanti eDebian ufana nenhlanzi esemanzini. (Ubaba wakhe uyi-software yamahhala iTaliban futhi wakhulela kuma-Debian PC ekhaya)
Ungibambe ngifunda ukuphawula kuka-Oscar.
Ngithandana neLinux, futhi angiyiguquli ngalutho, kepha izinto ngizibona ngendlela ehlukile. Ngizozama ukukuchaza ngamazwana okungewona awami, bekuvela kumuntu engimfundile enetheni futhi obekuyiminyaka eminingi edlule ngicabanga ukuthi ngiyakukhumbula lokho ku-Debian, kepha angicacisi kahle futhi ngathi okulandelayo:
Iwindows ifana nehhashi lasendle lapho othile ebophele khona i-lasso, wayithambisa, wayifaka isihlalo, kuthi uma ikunikeza, ikutshele ukuthi ufunde ukugibela.
Mayelana neLinux kuthiwe bakunikeza intambo futhi bakutshela ukuthi lapho unehhashi.
Imilayezo yakho iyanqwabelana. Kumele ngiye emsebenzini, siqhubeke ngokuhamba kwesikhathi.
Ngizamile amahlandla ama-3 nge-Ubuntu futhi angikwazanga, futhi ngikunikeza ilungelo kunzima kakhulu kulabo abadlula besuka ku-Windows baye ngapha ngoba abasebenzisi be-Linux abanolwazi bavame ukukhombisa ukuziqhenya futhi abasizi kangako. Ngiyabonga uNkulunkulu ngelinye ilanga nginqume ukuzama enye i-distro futhi ngathola i-LM, enginikeze izinto eziningi zokuzifaka ngokugcwele kulolu hlangothi.
Kuyadabukisa ukuthi akusiyo indaba yomngani wami owayefuna ukuzibandakanya nami futhi engakwazi nabashayeli bemisindo futhi esiteshini sezingxoxo soBuntu abamphathanga ngendlela enhle, noma ngabe ngizama kangakanani ukumkholisa, ngaye "I-Linux" ibiyisinyathelo esifushane esinokunambitheka okungalungile.
Kepha ngenxa yokukhululeka kweMint, sengivele ngikwazile ukuthola umlamu wami nodadewethu ukuthi babe neLinux kumakhompyutha abo futhi bayisebenzise kaningi futhi baneliseke.
Kungakho kulezi zinsuku, ngemuva kokuzama ama-distros amaningana, ngisebenzisa i-LM futhi ngukuthi yize abasebenzisi abaphambili (hhayi bonke) behlekisa ngakho ngesihloko esithi "isifihla-buso soBuntu" nezinye izinto engizohlala ngizo ngiyabonga futhi lokhu ngizokuthwala njalo enhliziyweni yami 🙂
Uthisha wami wezinhlelo zokusebenza wake wangitshela, “Ayikho iLinux engcono kuneWindows, futhi neWindows ayincono kuneLinux. Ziyizinhlelo ezimbili zokusebenza ezihluke ngokuphelele. Enye ingalungela into eyodwa noma enye, kepha ungalokothi usho ukuthi enye ingcono kunenye, ngoba uyazi ukuthi akulona iqiniso. Abantu abathi iLinux ingcono bayiziphukuphuku. Futhi abantu abathi iWindows iyamunca, nabo bayiziphukuphuku. " Futhi iqiniso ukuthi akalungile. Ngokusobala, ngithanda iLinux futhi bengisebenza neLinux isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili futhi ngijabule kakhulu.
IWindows ingaphezu kokuchofoza okungu-500 ukuthola into eyodwa. I-Linux, kunalokho, ukubhala ku-terminal futhi ube nenhlanhla yokuthi imiyalo isebenza, uma kungenjalo, iye kokunye uvemvane.
Vumelana kakhulu nothisha wakho. Ngikushilo kaningana nabangane bami lokho Windows kuyamunya, noma kunjalo, akukhona ngoba i-OS uqobo ingudoti, sengikushilo ngoba selokhu ngasebenza nayo I-GNU / Linux, Sengikutholile lokho Windows akusondeli kulokho engikudingayo njenge-OS, kungisiza kuphela ukudlala futhi angikwenzi nalokho. Konke kuyindaba yokunambitheka, futhi okuthandwayo kufanele kuhlonishwe.
Yilokho okuyikho ... Uma ufuna i-OS lapho ukuphepha kuyinto esemqoka, faka i-Linux ngaphandle kokungabaza. Uma ukuphepha kungenandaba nawe futhi ungomunye walabo abafuna izinto zenze izinto zibe lula, ngakho-ke gqoka kangcono iWindows. Uma ungumklami wezithombe futhi udinga ikhompyutha enamandla nesoftware efanelekile, bese uthenga iMAC ngaphandle kokungabaza. Uma u-geek ezimweni, faka i-Linux ngaphandle kwendawo yokuqhafaza bese wenza konke ngemodi yombhalo futhi ukhohlise kubangani bakho xDDD ... njll ... njll
ngifunda okuthunyelwe kwakudala ngithole lokhu futhi iqiniso yilokho okushoyo ngoba muva nje ngishintshe i-pc ebisebenzisa i-almendron ukuthola eyesimanjemanje, i-core i 3 futhi lapho ngifaka i-debian 6 haha ​​yanginika ama-hits ayi-10000 ngokusobala ukuthi i-kernel yami yayindala kakhulu kuyo hahaha futhi icishe yanginika isixazululo sezinkinga ngaya emafasiteleni xp futhi futhi ngathuka ngezwa sengathi izandla zami nemilenze kunqunyiwe nokuthi lokho kubuka kubi kakhulu futhi ngiyaganga kungenza ngibe nesiyezi ngicabanga ngakho haha ​​kwaphela ihora ngafaka debian 6 bese ubuyekeza i-kernel futhi ekugcineni bonke bajabule futhi
Okuphambene nalokho kwenzeka kimi, ngangikuthanda okuhlangenwe nakho kwami ​​kokuqala neLinux futhi kwangikhuthaza ukuthi ngithuthe ngokuphelele kule minyaka elandelayo. Emuva esikhathini sangaphambi komlando we-Ubuntu 7.04 ngangijabule ngeLinux ukuthi yehluke kanjani futhi yinhle kanjani nokuthi angitholanga amagciwane. Cishe eminyakeni emi-2 ngigcine ukuthumela ama-WIndows ukuthi aqhume, okuyinto iWindows Vista esize kakhulu ngayo ngoba siyazi ukuthi leyo nto iyihlazo.
Ngikholise abantu abaningi ukuthi basebenzise iLinux futhi ngaba umlutha wokuzama ama-distros, kusuka ku-puppy linux, crunchbang kuya ku-Archlinux, Fedora, OpenSuse, Debian, Sabayon, njll.
Into edabukisayo iza lapho phakathi kokushintsha nokushintsha kwekhompyutha ngaphoqeleka ukufaka yonke into futhi futhi lapho kufika izinkinga ezintsha zehadiwe, akukho neyodwa kulawo ma-distros eyagcina ingigculisile njengokwenza okuhle kwe-Ubuntu noma kwaveza izinkinga eziningi kunalezo ebesenginazo isikhathi ukumelana.
Ngemuva kokufakwa kwami ​​kokuqala kwe-Arch (esinye sezikhathi ezihlupheka kakhulu empilweni yami hahaha) bengingafuni ukuphinda ngiyenze, ngayijabulela kakhulu i-Arch kepha lapho ikhompyutha yami ifa, u-Arch wafa nayo. Izinsiza zama-cd abukhoma bezivele zingaphakathi kakhulu kimi.
Manje sthandwa sami Ubuntu, esikhundleni sokuzisungula ngeminyaka esenhliziyweni yami, okuwukuphela kwento ebekade ikwenza ngukuphela kodaka futhi ngigcine senginenzondo encane ngayo nakho konke. Ihardware yokugcina engibe nayo ibe nezinkinga eziningi nabashayeli engikhathaza ukuqhubeka nokuzama, isikhathi sami samahhala asisanginiki lokho, ngincamela ukuyodlala i-xbox.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngike ngazama i-pinguy OS nelinye lama-betas we-elementary OS luna kepha balokhu benginikeza ezinye izinkinga ezincane ezingibangela ama-tics ethukile njengoba kungenakwenzeka kimi ukumisa ama-monitors amabili ngesinqumo esihlukile ngaphandle kokugoqa yonke into phezulu.
Ngakho-ke ngifele eWindows cishe isikhathi esingaphezu konyaka ongu-1 manje. Ngifuna ngempela i-distro ethile ukuba izenzele, ibe yinto ejwayelekile, futhi ngigcine ngenza i-hardware evumelana nayo njengegilavu, njengamaqanda anebhekeni leTabasco.
Ngifuna ukwazi ukusebenzisa okuthile kukhompyutha yami okuthuthuke kakhulu njenge-Android, ukuthi njalo lapho ngifaka inguqulo entsha ngikhala izinyembezi zenjabulo ngendlela enhle futhi enhle ngayo. Kepha, i-Android ine-Google ngemuva kwayo futhi kuyinto enkulu kakhulu leyo i-desktop distros ayinayo.
Inqobo nje uma ungahloniphi, ungabhala ukuthi iWindows 8 iyisimangaliso sesishiyagalombili. Inkinga iza lapho ubuyela ku-Windows bese ubheka bonke abanye bengabantu abavuthiwe abangakakuboni ukukhanya noma abanesikhathi esiningi esikhululekile. Okuhlangenwe nakho kwakho kungokwakho wedwa. Ngokwami ​​anginankinga, yonke into ihamba njengoba kufanele. Ukwenza okuvela kokuhlangenwe nakho komuntu siqu sesivele sinoMiguel de Icaza. Uma ufuna ukusebenzisa i-GNU / Linux thenga i-hardware eyisekela ngempela, i-Android ayisebenzi kahle kuma-iPhones.
Ukungahloniphi ubani? uyahlanya noma uyitroli.
Mhlawumbe nginephutha, kepha ngicabanga ukuthi inkinga ngeLinux ukwehluka kokwabiwa okukhona nokuhlukaniswa kwabahlanganyeli ngalesi sizathu.
Uma ngandlela thile abathuthukisi be-GNU / Linux behlangana futhi bagxila ekwakheni ukusatshalaliswa okukodwa ngokuhluka okungu-1 noma okungu-2 (ngezinkinga ezithile) ngicabanga ukuthi i-GNU / Linux izonikeza i-Push emangalisayo.
Ngicabanga ukuthi bachitha umzamo ngamunye wabo eya engxenyeni yabo athuthukisa ukwabiwa okuhlukile.
Uzamile iMageia 2 noma 3, iya kumatiyetha futhi ibona yonke i-hardware okokuqala. Angizange ngibe nezinkinga futhi ngiyifakile kumakhompyutha amaningi anehadiwe ehlukile.
Anginandaba nokuthi umsebenzisi ngamunye ukhetha ini.
Inkinga yilapho umsebenzisi weWindows engena kwisithangami sosizo seGNU / Linux futhi asebenzise enye yaleyo mishwana njengokuphanga: "Kungangisiza noma ngibuyela kuWindows." Esithangamini engibamba iqhaza kuso (kubuntu-es.org) lezi zimo zilinganiselwe ngenxa yezizathu ezimbili eziyinhloko: Ngoba akuvunyelwe ukuqola, ukuthuka noma ukujaha abanye abasebenzisi, futhi ngoba asinantshisekelo yokuthi umsebenzisi unquma ukusebenzisa iWindows ngokuhamba kwesikhathi noma uhlelo olukujabulisayo. Ngenhlanhla, esithangamini sethu kunefilosofi yokufundisa i-GNU / Linux kulabo abafuna ngempela ukufunda, inqobo nje uma imithetho yokuhlalisana ihlonishwa. Asisona isixuku sabasebenzisi be-GNU / Linux abashiseka ngokweqile abafuna ukujoyina nathi nabasebenzisi abasha beWindows nganoma iyiphi inkokhelo, noma sivumele ukuhlukunyezwa okufana nokuzama ukuphanga.
ULuis Hernando Sanchez kusho
Okuhlangenwe nakho ngeGNU / Linux kube nezithelo, kumnandi futhi kumnandi kimi.
Njengoba ngike ngasho kwezinye izikhathi, angiyena uchwepheshe kulolu hlelo, kodwa ngiye ngazivikela, ngazama ama-distros amaningana entofontofo futhi kulula ukuyifaka futhi iqiniso ukuthi angizange ngibe nezinkinga ngabalindi kumakhompyutha ami, kokubili ideskithophu kanye ama-laptops. Namuhla nginezinhlelo zokusebenza zombili ezifakiwe, kepha engizisebenzisa kakhulu yizinhlobo zeLinux: Ubuntu 12.04 neMageia 2 futhi ngijabule ngazo zombili. Ngibonga uNkulunkulu ngokwazi kwethu lolu hlelo nabathuthukisi bezinhloso ezinhle, ngokuba ngcono kakhulu nokwenza kube lula ngangokunokwenzeka kubantu abanjengami.
Phendula uLuis Hernando Sanchez
Sebenzisa i-gnu / linux ukukholelwa emcabangweni, kuyinkanuko, ukukholelwa entweni ekhululekile, ukwazi ukuthi uzoba nezinkinga ngehadiwe yakho, kepha ungazinqoba .. kungukulwa uze ukwazi uhlelo futhi konke kuzoba lula ... lokho ukusebenzisa i-linux ukuyikholelwa futhi ngibe nesibindi sokubhekana nayo
ukusebenzisa amawindi kulula.
Kungcono ... Okubi kakhulu ... Uxolo, angikwazi ukuqhathanisa okungafani. Ukuqhathanisa izinto ze-ms nezinto ezisuselwa ku-gnu / linux kubonakala kungalungile kimi. Kufana nokuqhathanisa uhlobo lukaphethiloli oluzosetshenziswa emotweni. Ukuze ukwazi ukuqhathanisa, kufanele kusetshenziswe uphethiloli ofanayo wemikhiqizo ehlukene. Kuyafana ngezinhlelo zokusebenza. Izinto ezingeziwe ngezinto ezingeziwe. I-gnu / linux distros namanye ama-gnu / linux distros.
Bese kufika isici sefilosofi. Noma ngaphambili, akunandaba. Ngokuqondakalayo, ukuthunyelwa kwe-FSF kuyavuma. Kepha siphila, ngokuzisola kwethu, emhlabeni lapho ukuphela kuvumela izindlela. Yize siyakuphika.
Ngenxa yalezi zingxabano ezimbili, ngombono wami, kunamakhasi ahlekisa kakhulu.
Ngiyayazi ibhulogi lapho bekhuluma kakhulu ngamawindi, empeleni banengxoxo yokusekelwa futhi okokuqala lapho ngingena ngicabanga ukuthi bangangisiza ngenkinga encane ebenginayo ku-linux mint ... ukufingqa konke okuwukuphela kwento bangiphendula ngokuthi abakwazanga ukugijima "uhlangothi olumnyama" olulandelwa ukuhlekwa usulu kohlelo olufanayo. Kwesinye isikhathi ngihlala ngifunda yonke imilayezo abayibhala engxoxweni futhi ngibona ukuthi balwa kanjani ne-antivirus, i-explorer, i-serial, imifantu, njll.
Iningi labantu abasebenzisa iWindows abashintsheli kuLinux hhayi ngoba bengayithandi, kepha ngoba bengazi ukuthi bayisebenzisa kanjani, abathandi ukulwa ekuqaleni, bafuna konke kusesandleni futhi ngenxa yalezo zizathu benza izaba zokuthi "abayithandi »… (Iningi akubona bonke)
Usihlalo Meow kusho
Ngiqale ukusebenzisa iLinux muva nje, futhi kuze kube muva nje bekubudlelwano bothando / inzondo kuze kube muva nje. Bengihlala ngisebenzisa iWindows futhi kudala ngaphambi kwe-MS-Dos, kepha sengilithande leli zwe kancane. Esikoleni (yebo, buyela ekufundeni iminyaka yami ...) basibonisile ukusetshenziswa kwe-Debian ne-CentOS, futhi ukuze ngizisebenzisele mina ngifakele iLubuntu kwimemori ye-flash ukuze ibhule ku-BIOS njenge-disk enkulu . Yipulatifomu enziwa ngezifiso ngempela futhi isebenza nganoma yini oyiphonsa kuyo. Ukuphela kwento engibona ishoda ngayo ukuthi abantu bayisebenzisa kancane, yingakho kunokushoda kokuhlukahluka kwemikhiqizo, kepha kuyipulatifomu eqinile enezinhlobonhlobo zamadeski. Ngaphandle kwalokho ukusetshenziswa kwemiyalo yekhibhodi kungixhumanise neminyaka yakudala ye-MS-Dos. Noma ngubani ofuna ukusebenzisa iWindows futhi ungaphakathi kwamalungelo abo, kepha ilungelo elifanayo liyasisiza ngokusebenzisa iLinux. Kwesinye isikhathi awuyithandi incwadi ngoba nje ayisona isikhathi esifanele, futhi eminyakeni embalwa kamuva uyayithanda.
Phendula uSihlalo Meow
Sawubona. Ngiwumsebenzisi wezinhlelo zokusebenza zombili zeWindows neLinux, ngibeka iWindows kuqala ngoba iyona engiyisebenzisela umsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi azikho kulezi zinhlelo ezisebenzayo ezingcono kunezinye, kuphela ukuthi zehlukile, zinemibono ehlukile maqondana nezinqubo nokusetshenziswa. Ngingumsebenzisi okhululekile ngakho-ke ngisebenzisa imisebenzi yomibili ngokungafani ngokuya ngesidingo salokho okufanele ngikwenze, kepha ngiyacacisa ukuthi ngemuva kokusetshenziswa kwale misebenzi ayikho ifilosofi noma okunye okunjalo, konke kusekelwe esidingweni, uma iWindows ivumelana kangcono nomsebenzi engiwusebenzisayo, futhi uma iLinux ikwenza ngiyayisebenzisa nami. Ngibhale lo mbhalo ngeWindows ngoba bekuyikhompyutha esiseduzane enganginayo ngaleso sikhathi, uma incwajana yami ibineLinux futhi nangaphezulu ngesandla bengingayenza ngeLinux ... Sanibonani
Agatha Inyanga kusho
It is gribētu pateikties Lapo Micro Finance par man izsniegto aizdevumu. Mani vairākas reizes pievīla, cenšoties saņemt aizdevumu, līdz is uzgāju Lapo Micro Finance, kur man manšķīra aizdevumu 23 USD vērtībā, lai rūpētos par savu slimo bērnu. Ja jums šodien ir vajadzīgs reāls aizdevējs, sazinieties ar Lapo un neapmāniet. Ama -azini ama-e-pasta adresi: lapofunding960@gmail.com
Phendula u-Agatha Moon